Google Pixel iyo vs. iPhone 7 Plus: tijaabada xawaaraha ... wax badan ama ka yar | Wararka IPhone
Google Pixel iyo vs. iPhone 7 Plus: tijaabada xawaaraha ... wax badan ama ka yar
Paul Aparicio | | Android, Tartanka, iPhone 7
Waxaa laga tirtiray tartanka, taas oo ah, Samsung Galaxy Note 7 suuqa, waxaan dhihi karnaa tartanka ugu muhiimsan ee iPhone 7 uu wajihi karo waa Google Pixel, ugu yaraan inta caan ka tahay. Waxaa loo maleynayaa in marka la eego waxqabadka ay tahay inay sidoo kale noqoto mid ka hooseysa oo ka hooseysa waxaad haysataa laba fiidiyow oo ay si fool ka fool ah ugula kulmaan Google Pixel iyo Apple ee iPhone 7 Plus.
Kahor gelinta fiidiyowyada waxaan jeclaan lahaa inaan wax idhaahdo: sida inbadan ay uga cawdeen fiidiyowyo kale isla qoraha, waxay umuuqataa taasi SuperSafTV had iyo jeer wuxuu u xaaqaa Android, dareen aan maanta qaatay markii aan arkay sida ugu horeysa tijaabada xawaaraha. Waxyaabaha caadiga ah ee tijaabooyinka noocan ahi waa in tiro codsiyo ah la furo, oo isku mid ka ah labada aaladood, laba jeer, taas oo ah, laba laab, taas oo naga caawinaysa inaan samayno jilid yar oo wakhtiga ah oo aan lumin doonno maalinta oo dhan . Laakiin waxa aan ku aragno fiidiyowgan koowaad waa wax aad u kala duwan.
1 Google Pixel iyo iPhone 7 Plus oo ah imtixaan xawaare u gaar ah
2 Google Pixel iyo vs. iPhone 7 Plus: akhristaha faraha
Google Pixel iyo iPhone 7 Plus oo ah imtixaan xawaare u gaar ah
Waxa ugu horreeya ee aan ku aragno fiidiyowgii hore waa dhibcaha laga helay mid kasta oo ka mid ah aaladaha, iPhone 7 Plus oo leh dhibic dhan 3488/5590 oo ka dhan ah 1565/4103 ee Google Pixel. SuperSafTV ayaa markaa aadaya imtixaanka xawaaraha, midka aan ku dhaleeceynayo in uusan u sameynin sida kuwa kale, furitaanka dhammaan codsiyada midba midka kale labo jeer si loo hubiyo sida ay u furan yihiin markii ugu horeysay iyo sida ay u sameeyaan marka ay ku jiraan asalka.
Marka loo eego tijaabadan xawaaraha, ah Taleefanka Google wuxuu furaa barnaamijyada qaar dhowr iyo toban ilbiriqsi ka hor marka loo eego iPhone 7 Plus, sida kaamirada oo laga furo hurdada (waa fikrad fiican inaad riixdo badhanka, Google) ama Twitter. Google Pixel sidoo kale wuxuu marka hore furaa biraawsarka, laakiin waxay umuuqataa in wax kasta oo dhalaalaya aysan dahab ahayn: markaad geleyso bogga BBC, waxay umuuqataa Pixel inuu horay ufurmayo, laakiin markaan hoos udhigo waxaan arki karnaa sida iPhone 7 Plus uu leeyahay dhamaan sawirro la raray iyo Pixel-ka oo aan ahayn.
Waxaad dhihi kartaa furitaanka codsiyada waa hawl ay qabanayaan wax badan ama ka yar isla waqtigaas ... illaa aan ka gaadhno Ciyaaraha. Halkan waa halka Pixel ayaa aad uga dambeeya, aad u badan, iyo sababta aan ugu maleynayo in SuperSafTV uusan rabin inuu furo dhammaan codsiyada midba midka kale ka dib, maxaa yeelay faraqa ayaa noqon kara mid aad u muhiim ah loogu talagalay pro-Android.
Google Pixel iyo vs. iPhone 7 Plus: akhristaha faraha
SuperSafTV waxay kaloo rabtay inay isbarbar dhigto xawaaraha akhristaha faraha. Fiidiyowga waxaan ku arki karnaa 3 cabbiraad: laga bilaabo nasashada, oo leh shaashadda dusha iyo la'aan animations-ka. Pixel wuxuu ku guuleystaa shaashadda, halka iPhone 7 Plus uu ku guuleysto nasashada iyo animations-ka oo naafo ah. Waana lagama maarmaan in la aqoonsado taas, in kasta oo aan anigu shakhsi ahaan jecelahay oo aan door bido in la hawlgeliyo, animations-ka macruufka ahi waxay leeyihiin xawaare yar oo daal ah.
Sikastaba xaalku ha ahaadee Waxaan isku dayay inaan noqdo ujeedo, tani waxay ahayd isbarbardhigga SuperSafTV iyo sidoo kale Waxaan dhihi karnaa gurigeyga ayaan dhoobada uga sheekaynayaa si kafiican sida iPhone 7 Plus wax u sameeyo, xitaa haddii aad isku daydo inaad iska ilaaliso. Sidee u aragtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google Pixel iyo vs. iPhone 7 Plus: tijaabada xawaaraha ... wax badan ama ka yar
Taasi waa wax la mid ah, mid aan eex lahayn oo arki kara baalasha ka soo baxda horyaallada, tan ugu fiican, joojiso la wadaagga fiidiyowyadiisa oo aad siiso lacag ay ku dheehan tahay
Nasiib wanaag qoraha maqaalka wuxuu cadeeyay inuusan dhex dhexaad aheyn dhamaadka, maxaa yeelay waxaa lagaa dareemay dhamaan qoraalka adigoon cadeyn.
Shakhsiyan, farqiga weyn ee aan arko wuxuu kujiraa rarka ciyaaraha halka uu iPhone aad ugu dhaqsaha badanyahay (shey kale ayaa ah inuu dhaqaajiyo ciyaarta lafteeda, taas oo aan hubo inay labadaba dhaqaaqaan dhib la'aan). Imtixaanada intiisa kale waa kuwa yar yar oo maalinba maalinta ka dambeysa u maleyn maayo in waqti lumis ah lagu arki karo waqtigaaga qiimaha badan.
Iibsiga iyo doorashada mid ka mid ah labadan mobiil waa arin dhadhan, ama jeebab, taas oo ay adagtahay in lagu khaldamo, maadaama ay labaduba yihiin mobilo aad u fiican ... inkasta oo qoraagu ka xun yahay ...
PS: Waxaa laga soo diray Xiaomi xD
Adrian Romero Lopez dijo
Iyadoo aan loo baahnayn, isku mid maaha in ciyaarta lagu bilaabo 1080p marka loo eego 2K ... xD
Jawaab Adrián Romero López
Modemgate? Modem Qualcomm LTE ee iPhone 7 Plus ayaa ka dheereeya kan Intel
Toca Boo, waxaa lagu heli karaa qiimo dhimis weyn